Iilentile ngemifuno | Ukupheka kweKhitshi
Iilenti kunye nemifuno
UCarmen Guillen | | Cuisine yaseSpain, Cuisine yesiNtu, Ukutya, Izitya, Izitofu kunye neesobho zokupheka, Iiresiphi zemifuno
Nangona kusehlotyeni eSpain kwaye kushushu, ipleyiti elungileyo yeelentile akufuneki ilahleke amaxesha ambalwa kuyo nayiphi na indlu. Ke ngoko, sikuphathela iresiphi yeelentile ngandlel ilula kunaleyo siqhele ukuyibona nge chorizo ​​kunye nenye into eyikhalori.
Kule nto siyitshintshe i-chorizo iityhubhu zeham, kunye neetapile ze uzucchini. Songeze iminqathe kunye netswele… Ibimnandi kakhulu!
Ukutya okunempilo kunye neelensi ezinempilo: iilentile ezinemifuno. Siphantse sawasusa ngokupheleleyo amanqatha kwaye sishiyeke nesitya esityebileyo kwaye esilula kakhulu.
Uhlobo lweRipeipe: Imifuno
Iigrama ezingama-400 zeelentile
Amanzi kunye netyuwa
Sifaka imbiza, ukuze Iidina ezi-4, ukutshiza okuhle kweoyile yomnquma. Siyifudumeza ngaphezu kobushushu obuphakathi, kwaye ngelixa ishushu iyahamba ukucoca, ukuchuba kunye nokusika yonke imifuno: intsimbi ipepile, iminqathe, zucchini, igalikhi kunye netswele. Sisika yonke into ibe ngamaqhekeza amancinci ngaphandle kwegalikhi, esiza kuyongeza yonke.
Sifry yonke into malunga nemizuzu eli-10 okanye njalo emva koko udibanise iilentile, ityuwa kunye nepaprika encinci emnandi. Masiphinde ipheke eminye imizuzu eli-10, kwaye xa sibona ukuba iminqathe kunye ne-zucchini zithambile, sidibanisa amanzi kwaye songeza ityuwa encinci kwakhona.
Siyayiyeka pheka phezu kobushushu obuphakathi malunga nemizuzu engama-30 phantse kwaye silawula inqanaba lamanzi. Siza kongeza amanzi amaninzi nangaphantsi njengoko uthanda ngomhluzi omninzi okanye omncinci.
Xa kukho malunga nemizuzu emi-5 ukubekela bucala, siza kongeza ham tacos.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi zehlabathi » Cuisine yaseSpain » Iilenti kunye nemifuno